Akhri: Baarlamanka Soomaaliya oo diiday codsi uga yimid RW Cumar C/rashiid – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Baarlamaanka Soomaaliya oo dood kulul ka yeeshay codsi ka yimid Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid oo ahaa in cod u qaadista xukuumadda loo dhigo 22-ka bisha ayaa diiday codsigaas.
Dooda Xildhibaanada oo soo gaartay ilaa 3-da Galabnimo ayaa waxaa soo xaadiray 178 xildhibaan, waxaana dood kadib cod loo qaaday codsiga R/wasaaraha.
Guddoonka Barlamaanka Soomaaliya ayaa cod geliyey kaddib markii mudaneyaasha ay ku kala aragti duwnaadeen codsiga Ra’iisul wasaaraha, iyadoo codeyntna natiijada ka soo baxdeyna uu Akhriyey guddoonka Barlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan “Jawaari”.
“Codeyntii ay xildhibaannada Barlamaanka Federaalka Somalia u qaadeen codsigii Ra’iisul wasaaraha ee ahaa in dib loogu dhigo waqtiga oo golahiisa wasiirrada keenayo oo ku aadaneyd sabtiga soo socda, waxa ay u dhacdey sidan oo waxaa, waxaa madasha kulanka golaha ee guud soo xaadiray 178, mudane, waxaa ogollaatay codsiga 57, Mudane waxaa diidday 120, Xildhibaan, waxaa ka aamusay hal mudane, sidaa daraadeed Barlamaanka Somalia waxa uu ogollaadey in Sabtiga golaha wasiirrada la horkeeno Barlamaanka Somalia, ayuu yiri Afhayeenka Barlamaanka Soomaaliya.
Gudoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa horay u go’aamiyey in RW Cumar xukuumadiisa baarlamaanka horkeeno 17-ka bishaan oo ku beegan sabtida soo socota, hase ahaatee RW ayaa soo gudbiyey codsi dib loogu dhigaayo.
Diidamadan ayaa fariin u ah RW Cumar iyo madaxtooyada Soomaaliya, iyadoo la ogyahay in xildhibaano badan ka biyo diidsan yihiin sida loo dhisay xukuumadda cusub.